जान्नुहोस : यतिबेला सुत्नुभयो भने हुन्छ धनको नाश ! पुरा पढेर शेयर गर्नुहोला «
जान्नुहोस : यतिबेला सुत्नुभयो भने हुन्छ धनको नाश ! पुरा पढेर शेयर गर्नुहोला
Published : 17 February, 2020 12:58 pm
हिन्दू धर्म शास्त्रमा विभिन्न विषय बारे व्याख्या गरिएको हुन्छ । खानपान देखि शयन, निन्द्रा, सपना आदीका बारेमा पनि धर्मशास्त्रमा व्याख्या गरिएको पाउँछौं ।धर्मशास्त्रका अनुसार हामीले सुत्नु भन्दा अगाडी जहिल्यै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । गलत समयमा सुत्दा हाम्रो स्वास्थ्यलाई बेफाईदा पुर्‍याउनुको साथै हानिकारक मानिन्छ ।
यी हुन् सुत्नै नहुने तीन समय